ला लिगाको नयाँ सिजनमा मेसीको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको बार्सिलोनाको सुखद सुरूवात
३ भदौ, काठमाडौं । मेसीको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको बार्सिलोनाले एलाभेसलाई ३-० ले हराउँदै ला लिगाको नयाँ सिजनमा प्रभावशाली जित निकाल्दै सुखद सुरुआत गरेको । बार्सिलोनाको जितमा मेस्सीले दुई गोल गरे । अर्को
२ भदौ,काठमाडौँ । एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको छनोट खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोली आज घोषणा गरिएको छ । टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटा र कप्तान पारस खड्काको
१ भदाै, काठमाडाैँ । एशियाली महादेशको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सवको उद्घाटन शनिबार सेन्ट्रल जाकार्ताको गेलोरा बुङ कार्नो रङ्गशालामा हुँदैछ ।नेपाली समयानुसार साँझ ६ः१५ बजे उद्घाटन कार्यक्रम शुरु हुने प्रतियोगिताको इण्डोनेसियाका
१८औँ एसियन गेम्सअन्तर्गतको फुटबल खेलमा नेपाल लगातार दोस्रो पटक पराजित
१ भदाै, काठमाडाैँ । इण्डोनेसियामा जारी १८औँ एसियन गेम्सअन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग २–० ले पराजित भएको छ । स्थानीय विभाहा मुक्ति रङ्गशालामा बिहीबार साँझ सम्पन्न खेलमा भियतनामका लागि
२८ साउन, काठमाडाैँ । सरकारले सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण यसै वर्षबाट गर्ने भएको छ । सरकारको पाँच महिने कार्यप्रगति विवरणमा प्रदेश नं. १ को इटहरी, प्रदेश नं. २ को
साफ यू–१५ महिला फूटबलः बंगलादेशसँग ३–० गोलले पराजित हुँदै नेपाल सेमिफाइलमा
२८ साउन, काठमाडाैँ भुटानमा जारी दोस्रो यू–१५ साफ च्याम्पियनसीप महिला फूटबलअन्तर्गत आज आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३–० गोलले पराजित भएको छ । बंगलादेशसँग पराजित भए पनि नेपालले सेमिफाइनलको यात्रा
साफ यू–१५ महिला फूटबलकाे नेपाल सेमिफाइलमा
२८ साउन,काठमाडौँ । भुटानमा जारी दोस्रो यू–१५ साफ च्याम्पियनसीप महिला फूटबलअन्तर्गत आज आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३–० गोलले पराजित भएको छ । बंगलादेशसँग पराजित भए पनि नेपालले सेमिफाइनलको यात्रा
आइसीसी वान डे इन्टरनेशनलको नयाँ वरियतामा नेपालका तीन खेलाडी समावेश
२८ साउन, काठमाडाैँ । नेपालका ३ क्रिकेटर आइसीसी वान डे इन्टरनेशनलको नयाँ वरियतामा अटाएका छन । आइसीसीले सोमवार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालबाट बलिङतर्फ युवा स्टार सन्दीप लामिछाने तथा ब्याटिङमा सोमपाल कामी
चाबहिल स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा भेट्रान कप फुटबल आजदेखि शुरु
२८ साउन,काठमाडौँ । चाबहिल स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा खुला भेट्रान कप सिक्स ‘ए’ साइड फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि शुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा मोफसलका पाँचसहित १४ टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगिता संयोजक भरत थापाले
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको कप्तानमा लियोनल मेसी
२७ साउन, काठमाडाैँ । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको कप्तानको जिम्मेवारी लियोनल मेसीले पाएका छन । नियमित कप्तान एन्द्रेस इनइस्टाले क्लब छाडेसँगै बार्सिलोनाले मेसीलाई आफ्नो नयाँ कप्तान चयन गरेको हो । लामो समयदेखि आफ्ना लागि
गोथिया कप फुटबलमा सहभागी हुने नेपाली टोली चीनमा
२७ साउन, काठमाडाैँ । चीनको किङ्दाओ सहरमा आयोजना हुने गोथिया कप फुटबलमा सहभागी हुन नेपाली युवाको २० सदस्यीय टोली चीन पुगेको छ । टोलप्मा १६ खेलाडी र चार अफिसियल रहेका छन ।
२६ साउन, काठमाडाैँ । भुटानमा जारी दोस्रो यू–१५ साफ च्याम्पियनसीप महिला फूटबलमा नेपालले पाकिस्तानमाथि ४–० को फराकिलो जित हासिल गरेको छ । भर्खरै भुटानको थिम्मुमा सम्पन्न खेलमा नेपालले सातौँ मिनेटमै अग्रता